ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၄) – Paris Maung | MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျူနီယာဝင်း - သွားပွတ်တံအစ
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၄)
Lesson4( Leçon4)
ပါရီမောင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၃
Pronoms Personnels , Verbes
ပြုလုပ်သူ နာမ်စားများ ၊ကြိယာများ
Pronom Personnel သည် လူတဦး သို့မဟုတ် လူအများ ၊ အရာဝထ္တု တခု သို့မဟုတ် အများ က အကြောင်းအရာ တခုခုကို ပြုလုပ် ကြောင်းပြောဆိုရာတွင် ထိုပြုလုပ်သူ၏ အမည်နာမကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရေရွတ်နေခြင်း မှ ရှောင်ရှားရန် အစားထိုး သုံးစွဲရသော ပြုလုပ်သူ နာမ်စားဖြစ်ပါသည်။
အလွယ်မှတ်ရန်မှာ ပြုလုပ်သူနာမ်စားသို့မဟူတ် ကတ္တား ပုဒ် ဖြစ်ပြီး ကြိယာ ၏ ရှေ့တွင် အမြဲ ထား၍ သုံးရမည်။ ( ချွင်းချက်အားဖြင့် အမေး ဝါကျတွင် သာ ကြိယာကို ရှေ့တွင်ထား ရမည်)
အဆင့် ၃ ဆင့် ခွဲ ခြားနိုင်ပါသည်။
၁။ ပထမလူ မိမိ ကိုယ်တိုင်ကို ကိုယ်စားပြုသော ” je “ ကျနော်၊ ကျမ၊ ကျွနုပ် စသဖြင့် ( I )
၂။ ဒုတိယ လူ အပြောခံ ဖြစ်သော ” tu “ ခင်ဗျား၊ ရှင် ၊ နင် ၊ မင်း ၊ အသင် ၊ မောင်ရင် ( you )
၃။ တတိယလူ သို့မဟုတ် အရာဝထ္တု ဖြစ်သော ” il / elle “ သူ ၊ သူမ ( he / she /it )
ဟူ၍ ပြုလုပ်သူဆိုင်ရာ နာမ်စား ၃ မျိုး ဖြစ်လာပါသည်။ ထို ၃ မျိုးမှာ အနည်းကိန်းဖြစ်၍ ထို ၃မျိုးကို အခြေခံပြီး ဖြစ်လာသော အများကိန်း ၃မျိုး နှင့် ဆိုပါလျှင် စုစုပေါင်း ၆မျိုး ရှိလာပါသည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Singulier အနည်းကိန်း Pluriel အများကိန်း
1 Personne — Je ( ရ ရ်)အသံထွက်ရေး၍မရပါ Nous နူ
ကျနော်၊ ကျမ ၊ ကျွနုပ် ကျနော်တို့၊ ကျမတို့၊ ကျွနုပ်တို့
2 Personne — tu ကျူ Vous ဗူ
ခင်ဗျား ၊ ရှင်၊ သင် ၊မင်း ၊ မောင်ရင် ခင်ဗျားတို့၊ ရှင်တို့၊ သင်တို့၊မောင်ရင်တို့
3 Personne — il / elle အီလ် / အယ်လ် ils / elles အီလ်/အယ်လ်( s သံမထွက်)
သူ / သူမ သူတို့ / သူမတို့
အောက်ပါဇယား အတိုင်း မှတ်သား၍ နောက်ပိုင်းတွင် ကြိယာပုံစံ Verb Form ( Conjugaison ) များပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ယခုပုံစံ အတိုင်းသာ ထည့်သွင်း ပြုလုပ်သွားခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင် စာကြောင်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် လွယ်ကူ ပါမည်။ ထို့အပြင် ပိုင်ဆိုင်မှု ကိုပြဆိုသော Pronoms Possessifs ၊ ပစ္စည်းနှင့် သက်ရှိများကို ညွှန်းဆိုသော Pronoms Démonstratifs ၊ Pronoms Relatifs များ ၏အခန်းတွင် မှတ်သားရလွယ်ကူပါမည်။
အသံထွက်အမှန် ရရန်အတွက် အောက်ပါလင့်ကို နားထောင်လေ့ကျင့်ပါ။ ” Je ” ၏ အသံကိုအတိအကျ ရေးပြ၍ မရပါ။
” tu “ ဆိုသောအသုံးအနှုံးကို ရှင်းပြလိုပါသည်။အနည်းကိန်းအနေနှင့် ခင်ဗျား၊မင်း၊ရှင်ဟုသုံးစွဲရပြီးအင်္ဂလိပ်လို “you” ၏နေရာတွင် သုံးသည်။ သို့သော်လည်း မိမိ သူငယ်ချင်း ရင်းနှီးပြီးသောသူ ၊ မိမိထက် အသက် ကြီးသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်တွင် အတူတူ အလုပ်လုပ်နေပြီး ရာထူးအနေနှင့် သိပ်မကွာလှသူ၊ မိမိ၏ မိသားစုဝင်ထဲမှ တယောက်ယောက် ကို ပြောဆို သုံးစွဲရာတွင် ” tu “ ကိုအသုံးပြုရပါသည်။
” vous ” ကို သုံးရာတွင်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို “you” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပြီး အများကိန်းဖြစ်သော ခင်ဗျားတို့ ၊ ရှင်တို့ ၊ မင်းတို့ ဟူ၍ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ များအားလုံးကို ခေါ်ဆိုသုံးနှုံးပါသည်။သို့သော်လည်း ရာထူးကြီးသောသူများ ၊ ကိုယ်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း မရှိသောသူများ၊ မိမိထက် အသက် ကြီးသောသူများကို ရိုသေမှု ပြုသောအားဖြင့် တဦးထဲပင်ဖြစ်စေ ကာမူ ” vous ” ကို သုံးရမည်။
” il / elle ” အသုံး အနှုံးသည် သက်ရှိ ကိုသာမက သက်မဲ့ အရာဝထ္တု များကိုပါ အဖို၊ အမ ကိုလိုက်၍ သုံးစွဲပါသည်။ အများကိန်း တွင် “s ” ပါသော်လည်းနောက်ဆုံးစာလုံး အများစု အသံမထွက်ရသည့် မူအရ အသံထွက် တူသည်။
J’ai une voiture. Elle est belle . ရေ အယူးန်းဗွားကျူး ၊ အယ်လ် လေ ဘဲ လ်
ကျနော့်တွင် ကားတစီးရှိသည်။ သူမသည် လှသည်၊ ( ကားသည် အမနာမ် ဖြစ်၍ သူမ ဟုသုံးစွဲသည် )
ဝါကျတကြောင်းကို ရေးသားရာတွင်၎င်း ၊ ကတ္တား ပုဒ် တခု၏ လုပ်ဆောင်မှု ကို ဖေါ်ပြရာတွင်၎င်း လုပ်ဆောင်မှု ကို ဖေါ်ပြသည့် ကြိယာ မပါပဲ စာကြောင်းရေးသား၍ မရပါ။
Je suis étudiant. ကျနော် ကျောင်းသားဖြစ်သည်။(ဖြစ်ခြင်းပြကြိယာ) ပြောသူမိန်းကလေး ဖြစ်လျင် étudiante ဟူ၍ နာမ်၏ အမနာမ် ဖြစ်ခြင်းကို ချိန်ညှိပေးရမည် ။ ( Accord )
Elleaune voiture. သူမမှာ ကားတစီး ရှိ သည်။ ( ရှိခြင်းပြကြိယာ)
Nous regardons un film. ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင် ကြည့် သည်။ ( ကြည့်သည်ဆိုသော ကြိယာ)
ကြိယာများကို သုံးစွဲရာတွင် …..
မူရင်းကြိယာဖြစ်သော Verbe Infinitif ကို တိုက်ရိုက် သုံးစွဲခြင်းမပြုရပါ ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကတ္တား ပုဒ်တခု
( Sujet ) ကို ကြိယာ ( verbe ) တခုနှင့် တိုက်ရိုက် တွဲဖက် မသုံးရပါ ။
ဥပမာ … ကျနော် ရုပ်ရှင်ကြည့်သည် … ဆိုသော ဝါကျတည်ဆောက်ရန် အတွက် ၊ ကြည့်သည် ဆိုသည့် ကြိယာ အတွက် “watch” စာလုံးကို English – French Dictionary မှာရှာသောအခါတွင် ” regarder ” ဆိုသော Verb ကိုတွေ့ပါမည်။
တိုတွေ့ရှိသော ” regarder ” စာလုံးသည် Verbe Infinitif သာဖြစ်နေသေးသည့် အတွက် Subject နှင့် တွဲ ၍ ဒီတိုင်းသုံး၍ မရသေးပါ ။( Conjugaison ) ဆိုသော Verb Form ကို ပြလုပ်ပေးရပါမည်။
အင်္ဂလိပ် ဘာသာနှင့် ယှဉ်ပြီးပြောရလျှင်
သွားသည် ဆိုသော ကြိယာ ” go “ သည် ကတ္တားပုဒ် များနှင့်တွဲ သုံးသောအခါတွင်
အများကိန်းအတွက် we go , I go ဖြစ်၍
အနည်းကိန်းအတွက့် he goes , she goes ဟူ၍ Verb တခုသည် ပစ္စုပ္ပါန် ကာလ အတွက် “go” နှင့် “goes” ဟူ၍ ၂မျိုးသာ တွေ့ရပါမည်။ နောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် အဘိဓါန် တွင် တွေ့ရသော “ go “ ကို တိုက်ရိုက် ယူပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ အလားတူစွာပင် စားသည်ဆိုသော ဝါကျတွင် ” I eat ” ” We eat ” ” They eat ” “ he eats ” ” She eats” ဟူ၍ ” eat “ နှင့် ” eats “ ၂မျိုးသာတွေ့ရပါမည်။
ပါရီမောင်တို့ကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာကတော့ ထိုသို့မဟုတ်ပါ ။ ဒီတပါတ် သင်ခန်းစာ ရဲ့ အစဖြစ်တဲ့ Pronom Personnel , Sujet လို့ ခေါ်ရမဲ့ ကတ္တား ပုဒ် တွေ ၆မျိုး နဲ့ တွဲ ဖို့ အတွက် ပစ္စုပ္ပါန် ကာလ အတွက် Verb တခုချင်းကို ၆မျိုး သိရပါတော့မယ် ။ ပြင်သစ်စာရဲ့ အခက်ခဲဆုံးတွေထဲက တခုပါ ။ ( Conjugaison ) ဟုခေါ်ပါသည် ။ ဒီအတွက် အဘိဓါန်လို Verbe Conjugaison စာအုပ် သပ်သပ်ရှိပါသည်။
ခုနက ရုပ်ရှင် ကြည့်သည် ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ပြန်ပြောရရင် ၊ ကြည့်သည် ဆိုတဲ့ ” regarder ” Verb အတွက် ရေးရမယ်ဆိုရင် ….
Je regarde un film. ရရ် ရဂါတ်ဒ် အန် ဖင်းလ်မ်း ၊ ကျနော် ၇ုပ်ရှင်တကားကြည့်သည်။
Tu regardes un film. ကျူ ရ ဂါတ်ဒ် အန် ဖင်းလ်မ်း ၊ နင်/ခင်ဗျား ၇ုပ်ရှင်တကားကြည့်သည်။
Il/ Elle regardes un film. အီလ် / အယ်လ် ရ ဂါတ်ဒ် အန် ဖင်းလ်မ်း ၊ သူ/သူမ ၇ုပ်ရှင်တကားကြည့်သည်။
Nous regardons un film. နူ ရဂါတ်ဒ်ဒွန်အန်ဖင်းလ်မ်း၊ ကျနော်တို့ ၇ုပ်ရှင်တကားကြည့်သည်။
Vous regardez un film. ဗူ ရဂါတ်ဒ်ဒေ အန်ဖင်းလ်မ်း၊ ခင်ဗျားတို့၇ုပ်ရှင်တကားကြည့်သည်။
Ils / Elles regardent un film. အီလ်/အယ်လ် ရ ဂါတ်ဒ် အန် ဖင်းလ်မ်း ၊ သူတို့ /သူမတို့၇ုပ်ရှင်တကားကြည့်သည်။ ( il / elle အနည်းကိန်းနှင့် အသံထွက်အတူတူ )
ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ ပြောဆို၊ ရေးသားနိုင်ဖို့ အတွက် ပစုပ္ပါန် ကာလ Present Tense အတွက်သုံးနှုံး ဖို့ ကိုပဲ Verb တခု ရဲ့ ပုံစံ ၆မျိုးကတော့ မလွဲ မသွေ သိရပါမယ်။ သဒ္ဒါ နည်းမှန်ကန်စွာ ပြောဆိုနိုင် ဖို့၊ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အဆင့် အတွက် အချိန်ကာလပြပုဒ် Tense ၆မျိုးလောက်ကတော့ တတ်ရပါမယ် ။ Verb တလုံးတွေ့တိုင်း အဲဒီပုံစံ ၆မျိုး နဲ့ အလွတ်ရနေဖို့လိုပါတယ် ။
လန့်မသွားပါနဲ့ဦး ။ Verb အုပ်စုတွေ ကို ခွဲခြားထားတာ ကို အလွယ်မှတ်နည်းတွေ ရှိပါသေးတယ် ။ တချို့ သီးသန့်Verb တွေကိုသာ အသေမှတ်ရပါမယ် ။
Verb တိုင်းကိုအသံထွက် မပေးနိုင်ရင်လဲ အောက်က လင့် အတိုင်း ပုံစံဝင်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ မကြာခင် သင်ခန်းစာတွေမှာ Preposition, Adjective တွေ နဲ့ နှုတ်ဆက် စကားပြောတာတွေ ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ ဈေးဝယ်ထွက် တာတွေ စတဲ့ စကားပြော သင်ခန်းစာတွေကို အသံဖိုင်နဲ့ အတူ ရှင်းပြပြီး Grammar ဆက်ကြတာပေါ့နော် ။
ဆရာနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ဖို့ parismg2013@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။